अब ओली सरकार ढल्छ कि रहन्छ ? (भिडिओसहित) - NepalTimes
अब ओली सरकार ढल्छ कि रहन्छ ? (भिडिओसहित)
२२ चैत, काठमाडौँ । लामो समयको अनिर्णयको घेराबाट बाहिर निस्केर शुक्रबार नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै सरकारको नेतृत्व लिने निर्णय गरेपछि ओली सरकार ढल्ने दिनगन्ती सुरु भएको छ । अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाउनु पहिलो आवश्यकता हो । तर सरकारका लागि सवैका स्वार्थ बाझिएकाले त्यो विषय त्यति सजिलो भने छैन ।
तीन दलको सहकार्यबाट मात्र सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत पुग्ने भएकाले जसपाको साथ विना ओली सरकार ढाल्न र नयाँ सरकार गठन गर्न सम्भव छैन यद्यपी जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई खेमाले ओली सरकार ढाल्न पहल गरिरहेकाले जसपाको अर्को खेमालाई सहमत गराए ओली सरकार ढल्ने निश्चित छ ।
कांग्रेसले लामो समय सरकार गठनका विषयमा निर्णय नदिँदा छाएको अन्यौलता चिरिएकाले नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिले कोल्टे फेरिसकेको भन्दै नयाँ सरकार चाँडै गठन हुने बताएका छन् । नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि ओली सरकार ढाल्न, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विकल्प छन् ।
अझ पछिल्लो समय त ओलीले संसदबाट बहुमतसिद्ध गर्नुपर्ने विषयले राजनीतिक र कानूनी रुपमा चर्चा पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले, हालको अवस्थामा आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन् । उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चूनौती दिएका छन् ।
तर सरकारमा जान खुट्टा उचालेको कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएपनि कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने घोषणा गरेको छ ।
राजीनामा नदिए सरकारबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन कांग्रेसको योजना हो । यसअघि, समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता एकै पटक हुने भनि प्रचण्डले घोषणा गरेजस्तै गरि, ओलीले राजीनामा नदिए संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेर ओली सरकार ढल्ने देखिएको हो ।
सरकारमा सहभागि हुने/नहुने विषयमा लामो समय पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेको कांग्रेसले निर्णय गरे लगत्तै ओली सरकारको विकल्प खोजिरहेको माओवादी केन्द्र ओली विरुद्ध बलियो भएको छ ।
राजनीतिक अंक गणितमा अब दल र राजनीतिक विश्लेषकहरुले भनेजस्तै अपवित्र गठबन्धनपछि प्रचण्ड र देउवा थप मजबुत भएका छन् । ५३ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रले ओलीका विरुद्धमा कांग्रेसका ६३ सांसद पाएको छ ।
अब जसपाको दुवै खेमालाई माओवादी र कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा पार्न सके ओलीको विरुद्धमा सामान्य बहुमत १३८ संख्या पुर्याउनेछ । तर माओवादीका केही सांसद ओली तर्फ लागेकाले यो सख्या केही तलमाथि हुन सक्छ । तर काग्रेसले सरकारका लागि पहल गरेपनि १ सय २१ सांसद सहित बलियो अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई आफ्नो समर्थनमा लिएमा ओली सरकारले नै निरन्तरता पाउने संभावना पनि त्यति नै रहेको छ ।